अझ सजिलोसंग बुझौ, हामी मुखले पनि स्वास लिन्छौँ , नाकले पनि स्वास लिन्छौँ । नाकबाट जाने स्वास नलि र मुखबाट जाने अन्ननलि रुद्रघण्टी मुनी पुगेपछि मात्रै आ – आफ्नो प्रकृयाको लागि छुटिन्छ । त्यसभन्दा माथिको भागमा एकै रुपमा आउछ । त्यहि भागलाई हामी ‘एरो डाइजेष्टिक ट्रयाक’ भन्छौँ । स्वासप्रस्वास प्रकृयामा जव त्यहि (एरो डाईजेष्टिक ट्रयाक) भागमा अवरोध हुन्छ मान्छे घुर्न थाल्छ ।
मुखको ठयाक्कै पछाडी भएको जिव्रो भन्दा माथि र तालुभन्दा तलको घाटीको भाग (मुखे घाटी) भन्छौँ । त्यस्तै त्यसभन्दा मुनी रुद्रघण्टी भन्दा पछाडीको अर्को भाग जसलाई नाकेघाटी भन्छौँ । यी भागमा कुनै पनि कारणले समस्या आएमा मान्छे घुर्न थाल्छ ।
–नाकमा समस्या भएका व्यक्तिहरु
–तालुको समस्या भएका व्यक्तिहरु
अत्यधिक मोबाइल प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
फर्सी खानुका फाइदै फाइदा
तपाईलाई थाहा नहुनसक्छ जमराको जुसको यी १० अद्भूत फाइदा
यस्ता व्यक्तिलाई हृदयघातको सम्भावना बढी
ब्लडप्रेसर जाँच गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोस्
स्वस्थ कलेजोका लागि कस्तो बानी त्याग्ने, कस्तो बानी अपनाउने ?
यी हुन् स्याउ खानुका अजबगजब फाइदाहरु
युरिक एसिड हुँदा के गर्ने ?
सूर्यको प्रकाशबाट अब हृदयरोगको उपचार
किन नखाने चिनी ?
खुट्टा निदाउने समस्या छ, यसो गर्नुहोस्